विदेश जानका लागि पैसा दिने तर कागज गर्ने बेलामा घर खर्च चलाउन भनेर गर्नेमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ ?
Mon, Dec 09, 2019 | 17:22:01 NST
09:08 AM (6 years ago)
प्रश्न : वैदेशिक रोजगारमा पठाउने भनेर पैसा लिने अनि घर, व्यपार, व्यवसाय गर्नका लागि पैसा लिएको हो भनेर कागज गर्नेमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ ?म त्यस्तै समस्यामा परेको मान्छे हुँ । मलाई एक जनाले अफ्गानिस्तान पठाइदिन्छु भनेर ३ लाख लियो तर कागज गर्दा घर खर्च चलाउन लिएको भनेर गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कस्तो कारबाही हुन्छ ?
उत्तर : दिवस आचार्य, निर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग - करकाप गरेर तपाईंलाई कागज गर्दा तपाईंले प्रहरीमा उजुरी गरेर त्यसको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार पनि कारबाही हुन्छ । तपाईंले प्रमाणसहित कानुनी कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमार्फत मुद्दा चलाउन पनि सक्नुहुन्छ ।